Spotify uye chishandiso chayo kuziva yegore rino chiitiko data | IPhone nhau
Saka iwe unogona kuziva mangani maminetsi emumhanzi awatamba panguva ya2017 paSpotify
Mimhanzi chikamu chemazuva edu uye nekufamba kwenguva kunyorera kutsva uye masevhisi anoonekwa anoita kuti zvive nyore kutamba nziyo. Apple yakatanga yavo yega sevhisi makore mashoma apfuura, Apple Music, uye nhasi inogona kukwikwidza yakanangana neSpotify yekuve imwe yeanonyanya kushandiswa mimhanzi kutenderera masevhisi eiyo nguva. Spotify yakaburitsa webhusaiti kwatinogona kuona pfupiso yechiitiko chedu panguva ya2017 papuratifomu yako. Kana iwe uri mushandisi akavimbika weichi chinotenderera sevhisi sevhisi, isu tinokudzidzisa iwe kuti uzive sei mangani maminetsi emumhanzi awakateerera gore rino.
Spotify inoshandura netiweki neayo nyowani yegore chiitiko chiitiko
Gore rega rega, Spotify inoita kuti iwanikwe kune vashandisi chikuva paunogona kudzidza nezve chiitiko ichi yemumwe mushandisi mushumiro: manhamba, kuenzanisa ... Iyo yakanaka nzira yekuwana inonakidza dhata nezve mashandisiro atinopa kuchikuva uye uwane mimhanzi ipi yatinoteerera zvakanyanya kana nziyo ngani dzakasiyana dzatakanzwa mugore rapfuura.
Ikozvino yave kuwanikwa Spotify's kutenderera kwegore. Kana iwe uchida kuiwana, iwe unofanirwa kungo pinda Iyi link uye pinda neSpotify data. Kana iwe ukaizarura pane chishandiso pawakave neakaundi account, zvichave zvakakwana kupa mvumo yekuwana kubva kuchishandiso icho pachacho. Kamwe mukati iwe unokwanisa kuwana iwo manhamba atanga tichitaura nezvazvo muchinyorwa chino.
Pakati pezvikamu zvakasiyana iwe unozokwanisa kutaurirana uchishandisa mimwe mibvunzo inofambidzana nezve iwe unofunga chii chave chiri mhando yakanyanya kutererwa newe mukati megore, muimbi wako waunofarira kana rwiyo rwako rwakanyanya kutererwa. Ipapo, iwe unozogona kuziva iyo nhamba yemimhanzi yakateererwa, huwandu hwenziyo uye akasiyana marudzi uye maartist akaridzwa. Chekupedzisira, iwe unogona kurodha pasi chifananidzo neese manhamba kuti ugone kugovana pasocial network neshamwari dzako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Saka iwe unogona kuziva mangani maminetsi emumhanzi awatamba panguva ya2017 paSpotify
Mune maonero angu, ichiri chinonyanya kufarirwa mimhanzi chikuva chinoshandiswa nevashandisi. Uye ini ndinoda kugona kuona mimhanzi yegore negore iri kutamba nguva pachikuva ichi.
IPhone inoramba iri kamera inozivikanwa kwazvo yeFlickr
Mumhanzi wekushambadzira sevhisi Tidal ikozvino inotsigira CarPlay